SIDEE LOO BEERAA OO U KORAAN CANABKIISA CANABKIISA XARAASHKA AH AAGGOODA - CANAB
Kishmish waa magac guud oo loogu talagalay tiro badan oo kala duwan oo ah noocyada kala duwan ee canab, kala-goyska yar iyo dhadhanka macaan ee berry, iyo sidoo kale maqnaanshaha abuurka iyaga ku jira. Tilmaamahan waa in la tixgeliyaa marka la dooranayo sabiibta canabka ah si loo beerto aagaggooda, tan iyo foosha xayawaanka canab, beerta tayada dhirta iyo sifooyinka daryeesha dhirta si aad u kala duwan ayaa ku xiran hadba noocyada kala duwan.
Tilmaamaha iyo qaababka bayoolojiga
Canabkii kicmish waxaa loo beeray natiijo ka timid shaqada dheeriga ah ee hawshu ka soo baxdo, kuwaas oo hadafkiisu yahay in la helo dhaqanka tayo sare leh oo kori kara oo kobciya sida caadiga ah xaaladaha kuleyl aan ku filnayn xagaaga iyo dhaxanta daran ee xilliga jiilaalka. Si loo xaliyo dhibaatada jiilaalka ee canabka kulul-jecel, sida si fiican loo yaqaan khabiirada, hoos u dhigida tiknoolajiyada ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa, sidaas darteed, tarbiyeyaashu waxay la kulmeen hawsha dhirta geedka canabka ah ee ugu jilicsan ee aan jabin karin marka la riixo dhulka.
Ma taqaanaa? Halyeey khabiir ah wuxuu ku xiran yahay asalka noocyada cayayaanka khamriga: waxaa la yiraahdaa erayga "kishmish" waxaa laga sameeyay labo erey oo ah "shoo, mouse!": Tan iyo miro aad u macaan leh oo canabkani ku raaxeysanayo jiirarka, Central Asian wine-growers waxay isku dayeen inay jardiinooyinkan yar ka baxaan geedka canabka ah, laakiin halkii laga goosan lahaa, kaliya dhibcaha jiirka ayaa inta badan laga helaa geedka - sida yar sida sabiibta. Dhab ahaan, "Kish Mish" ee Carabiga macnaheedu waa "canab lagu qalajiyey" ama, fikradayada, sabiibta, taas, sida aan ognahay, ayaa laga sameeyay sabiib.
Ereyada yaryar waa in la sheegaa ku saabsan joogitaanka godadka sabiib ah. Qoraalka ah in aanay jirin dhagxaan noocyada noocaas ah, xaqiiqda, maaha gebi ahaan run.
Waa muhiim! Waxaa jira afar kooxood canab, iyo haddii labada lafo ee ugu horreeya ay noqdaan kuwo gebi ahaanba maqan, ama ay aad u yaryihiin oo ku dhawaad ​​ma dareemaan marka berry ay qaniinaan, ka dibna noocyada saddexaad iyo afaraad ee canabkani waxay leeyihiin miraha la taaban karo. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad ku beerato oo keliya canab aan macno lahayn, weydii iibsaha nooca sabiibta kala duwan ee la doortay.
Hawlaha xoolaha ee ku saabsan taranta noocyo cusub oo sabiib ah ayaa si joogto ah u socda, si kastaba ha ahaatee, nasiib daro, inta badan noocyada cusub ee la abuuray oo kaliya waxay ka tirsan yihiin kooxda saddexaad iyo afaraad, kuwaas oo ku jira dalab yar oo hubaal ah looma tixgelin karo heer sare.
Ma taqaanaa? Cinjirku wuxuu ku xiran yahay ma aha oo kaliya noocyada kala duwan, laakiin sidoo kale xaaladaha cimilada: lafaha way ka sii adag yihiin, kulaylka waxay ahayd markii ay berry u bislaadaan.
Dooro noocyo kala duwan oo sabiib ah, oo hagaya shuruudo kala duwan - caabbi barafeed, wax soo saar, lafaha, dhadhanka, midabka, muddada bislaanshaha, iwm. Sidaa darteed, noocyada sida Goldin, Romulus, Korinka Ruushka, Perlett, casaankii Tairovsky oo ka mid ah kooxaha sabiibta aan lahayn ee kor ku xusan.
Lafaha ballaaran oo adag waxaad ka heli doontaa canabki sabiib ah ee Moldavian, Zaporozhye, Radiant, Rigoorada, qaabka hybrid 311 iyo kuwo kale oo badan.
Fadlan naftaada iyo qoyskaaga oo leh noocyo caleemo ah sida "Gala", "Annie", "Novocherkassk Anniversary", "Talisman", "Isbeddel", "Veles", "Laura", "Timur", "Arcadia", "Kodryanka" "", "Layli", "Cardinal", "Rizamat", "Monarch", "Ruslan", "Original", "Sphinx", "Augustine", "Harold", "Valentine", "Lily Dooxada", "Helios" "Laxia", "Victoria", "Chameleon", "Delight", "Rochefort", "Lancelot", "Blagovest", "Zabava", "Sofia", "Lydia", "Xusuusta Negrul", "Amursky", " Dareenka "," Ataman "," Pretty Woman "," Kesha "," Moldova "iyo" Aleshenkin ".
Dhinaca kale, isla Romulus, oo ah qalab weyn oo loogu talagalay sabiibta, ayaa leh tayada xun - berry ay aad u sahlan tahay in la jarjarey, tegaayo beeraha iyada oo aan laga goosto goosashada, halka Radiant ka qadimay ku xeeldheer uu si fiican u ilaaliyaa baadiyaha.
Kishmish Zaporozhye waa mid aan qabyo ahayn, ku dhowaad ka baqi maydhin oo uu leeyahay dhalid sare oo waa in si dhaqso ah looga saaraa si looga fogaado in kabadan geedka canabka ah. Noocyo sarreeya ayaa sidoo kale waxaa ku jira Rusbol iyo Zosya, inkastoo ugu dambeyntii waxaa lagu gartaa caabbinta barafowga oo hooseeya, iyo sidoo kale dhererka guud iyo u nugulaanta cudurrada kala duwan.
Inta badan aan qabyo ahayn waxaa ka mid ah noocyada canabelnye canabelnye, tusaale ahaan, Rilaines Pink Sidlis ama Ainsens Sidlis iyo kuwo kale.
Kuwani waxay ku habboon yihiin kuwa bilowga ah, sababtoo ah, waxay ka duwan yihiin Beelaha sare ee heerarka sare, waxay u dhaafi karaan milkiilaha khaladaadka dhirta, manjooyin iyo dhaqamada kale ee beeraha.
Wareeyska canabka ayaa dhacaya midabyo kala duwan - madow, caddaan, casaan.
Ma taqaanaa? Inta ugu badan ee nafaqooyinka - fiitamiinada iyo mareellada - waxay ku jiraan canab madow, iyo xeerkani wuxuu khuseeyaa ma aha oo kaliya sabiibta, laakiin sidoo kale noocyo kale oo ah nooca berry ah.
Waxaa jira xeerar badan oo caalami ah oo loogu talagalay iibsashada wax kasta oo dhir ah. Marka hore - Waa arrin aad u macquul ah inaad alaab ka iibsato goob la xaqiijiyey: Fikrad ahaan, laga bilaabo beeraley aadka u yaqaan (kuwaas oo isla waqti ku siin doona talooyinka lagama maarmaanka ah iyo ka jawaab dhamaan su'aalaha) ama ugu yaraan dukaanka la xaqiijiyey (gaar ahaan khabiir, ha ku jirin dukaamo), ama goobta internetka.
Qalab kale oo wanaagsan - la soco khabiir takhasus leh oo dooranaya adiga oo kaa badbaadinaya iibsashada qaldan.
Haddii ay tahay inaad sameysid doorasho kuu gaar ah, isticmaal talooyinkan soo socda:
Uma baahnid inaad iibsato geedo leh xididdooyin la qalajiyey (haddii ayeeyadu u taagan tahay waddada qorraxdu u furan tahay waxayna iibisaa canabkiinna qoday - kalsooni ku qabsosida nooca canabka ah ee aanad u badnayn inaad dib u soo noqoto).
Haddii aad doonaysid in aad ku beeri canab ku dhicid dayrta, Ha iibsan geedo leh caleemo: Marka qotonta qoryaha, caleemaha waxay u baahan yihiin in la gooyo, haddii kale baadiyaha u dhaqdaa si deg deg ah kadibna ma degi karto.
Iibso geedo u baahan kaliya xilli ciyaareedka: haddii suuqa oo dhan aad aragto hal iibiye oo "kor u qaada" alaabta lagu beerayo ka hor inta kale, ka feker hababka uu u isticmaalay in la sameeyo geedka canabka ah muuqaal ah. Intaa ka sokow, sapling waa in la keydiyaa muddo dheer ka hor inta ay tahay wakhtigii si ay u beeri on dhulka - tani sidoo kale waa halis weyn in canab markaa ma degi doonto. Soo iibso wakhtigii iyo dhulkii isla markiiba!
Weydii iibiyaha inuu yareeyo "madaxa" seeding dhowr millimitir ama si tartiib ah u xoqin qayb yar oo ka mid ah jilif si loo hubiyo in geedka canabka ah uu nool yahay (gooyaa, geedku waa inuu leeyahay cagaar iyo qoyan yar oo qoyan). Waxa kale oo loo baahan yahay hubi xididada sapling, jarida caaro yaryar oo si taxadar leh u kormeerta gooyo - xididka nool waa iftiin iyo qoyan, sida baradho la jarjaray qeybtii, waayo dhimashadu waa qalalan oo mugdi ah.
Si fiican leexin geedka canabka ah: Qallalan ayaa jaban (qallayl yar) marka qaansadu caadi tahay. Si tartiib ah hoos ugu cadaadi seedka fartaada - waa inayan jebin.
Iska hubi in ilmo-yare uu ku tallaabsaday: qaado hal gacan oo ka sarreeya tallaalka, u dhig midka kale, oo si tartiib ah u jajabiso sida haddii aad rabto inaad dharka dhaqdo. Awood waa in ay ahaato mid buuxda - No cod, wax khasaare ah oo ka jira goobta tallaalka waa in ay soo baxaan.
Ma taqaanaa? Haddii iibiyuhu aanu jeclaan karin waxqabadka aad qabanayso, ku tali inaad si madaxbannaan u fuliso. Laakiin, markii uu helay diidmo la'aan, adoon laalaabin, diido inuu iibsado: canabku waa ku filan yahay dhirta furfuran, iyo in la dego, seedling waa in ay ahaato tayo aan habooneyn!
Xaydha waa in ay ahaataa qiyaastii 0.5 cm oo weyn iyo ugu yaraan shan dabayl oo dhalaalaya. Fadlan hubi shinni ahaanshaha maqnaanshaha waxyeellada farsamada, raadadka caaryada, lebiska iyo dhumucda aan la fahmi karin (labadaba xagasha iyo saadaasha).
Meesha tallaalka, si kastaba ha ahaatee, waa in la eegaa: Haddii aadan adigu arag, ha u qaadin ereyga iibiyaha - waxaa laguu siinayaa seedling aan tallaalnayn. Dhumucda rootstock iyo scion waa in ay u muuqdaan kuwo si muuqda u kala duwan, marka lagu daro, seedling aan tallaalnayn badanaaba wuxuu leeyahay nidaam xidid ka awood badan oo ka mid ah ku tallaabay.
Waa muhiim! U hoggaansanaanta sharciyada kore waxay xaqiijineysaa in aadan iibsan doonin wax xun, laakiin macnaheedu maahan inaad iibsato mid wanaagsan: iibiyayaashu aad ayay u fiicanyihiin marka ay bixiyaan alaabo tayadoodu sarayso sida heerka sare, iyo qiimaha sarreeya ama qoyaanka dibedda ah ee ka imaanaya waxay kaa badbaadin doonaan been abuur. Sidaa darteed, qawaaniinta ugu muhiimsan ee iibsashada abuuritaanka wanaagsan waa in lala xiriiro alaab-iibiye la aamini karo.
Canab ee qajmiska, taas oo ku xidhan kala duwanaanta, waxay noqon kartaa wax badan ama ka yar, laakiin guud ahaan, beerashada iyo daryeelidda noocyo kala duwan waxay u baahan tahay inay raacaan isla xeerarka.
Canabka, sida geedaha, waxaa lagu beeray guga ama dayrta. Qaab walba wuxuu leeyahay taageerayaashiisa.
Dabcan, beerto xilliga dayrta waa mid wanaagsan sababtoo ah waxaa jira inta ugu yar ee u dhaxeysa wakhtiga qashinka iyo dhirta, sababtoo ah sida sapling ka badbaadaya kaydinta muddada dheer inta lagu jiro jiilaalka, lama ogeyn, khatarta dhimashada halkan waa mid aad u ballaaran.
Dhinaca kale, haddii jiilaalka soo baxo inuu yahay mid aad u adag, waxaa jira macquul sareeya in a liidan-koray oo aan si buuxda seedling xidid kama hor istaagi kartaa dhaxan oo u dhinta. Qaar ka mid ah cirbadaha, iibsashada munaasabada noocyo kala duwan oo geedo ah oo aad u yar oo geedo ah xilligii dhulku horay u qaboojiyey, waxay ku maareeyaan canab geed xitaa xilliga qaboobaha, doorashada maalinta khaas ah ee diirran oo leh heerkul wanaagsan, si aanay u soo bandhigin shinnida khatarta kaydka dheer iyo natiijooyinka soo socda ee aan la saadaalin Karin.
Haddii aad doorbidayso beeritaanka guga, waxaad sugto diirimaad joogto ah iyo daryeelka ugu dambeeya ee dhaxan habeenkii. Waqtiga ugu habboon - laga bilaabo Abriil 20 ilaa May 20.
Xilliga dayrta, beerto waxaa la sameeyaa bisha Oktoobar ama xitaa kadib, laakiin ka hor inta uusan dhaxan, dabcan, waxaad u baahan tahay inaad qabato. Sidaas darteed in seedling uusan qaboojin, waxaad ku dabooli kartaa dhalo caag ah ama ku dhaji cagaha geed ama peat.
Berry khamri wuxuu jecel yahay diirimaad iyo qadar badan oo iftiin ah, sidaas darteed haddii uusan jirin meel ka mid ah goobtaada, waxa fiican inaad doorato dalag kale oo beerashada Sidoo kale ma ku beeran kartid canabka ku dhow guriga iyo dhismooyinka kale ee galbeedka ama bariga, sababtoo ah xilligaas ama qaybta maalinta kiiskan ayaa hoos u dhici doonta geedka canabka ah, oo miro kululaan ma soo kici doono sida la rajeynayo.
Geedaha - deriska xun ee canab: marka laga reebo hooska aan loo baahnayn, waxay ka hortagayaan horumarinta nidaamka xididka geedka canabka ah, oo xoqinaysa xididdadiisa.
Ma taqaanaa? Haddii aad ku beeri canab on dhinaca koonfureed ee dhismaha caasimadda ama derbiga, geedka canabka ah waxaa laga ilaalin doonaa dabaysha woqooyiga iyo, waxaa intaa dheer, kuleyl dheeraad ah ka heli doonaa kulaylka.
Caleemaha canabku waxay ku yaallaan qoto dheer, sidaa darteed, dooranaya meel loo beerto, waa in aad hubisaa in aysan jireynin biyaha sare ee meeshan ku jira meeshan ama gooynaya, haddii kale xididdadu way qudhmi doonaan, canabkuna wuu dhiman karaa. Ma lihi kartid geedka canabka ah meel u dhow maryaha ama dabka, sida canabku jecel yahay carrada nadiifka ah. Sidoo kale, warshadani uma dulqaadanayso boodh, sidaas darteed waa in la soo celiyo waddada, sidoo kale, waxay u baahan tahay inay isku daydo inay ilaaliso.
Meesha ugu fiican ee ay duurka u daaqaan khamri - xagasha koonfurta (dhinaca koonfur galbeed ee buurta ayaa sidoo kale samayn doona). Masaafada u dhexaysa geedo waa inay ahaataa ugu yaraan laba mitir.
Waxaan qodno godadka 0.7 m qoto dheer, 0.4 m width, 0.8 m dheer (qaybta dheer ee godadka waa in laga dhoofiyaa waqooyiga ilaa koonfurta).
Qeybta hoose ee god kasta waxay lakabisaa lakabka ash iyo superphosphate, ka dibna - lakabka dheecaanku (quruurux quraafac ah, xashiish, dhoobo ballaaran, iwm.).
Kadibna waxaan isku darnay ciidda daloolka: ciid, humus iyo dhul beeran.
Waxaan ku rakibeynaa tuubbo kasta (tusaale ahaan, caag) oo leh dhexdhexaad ah ugu yaraan 5 cm iyo dherer ah hal mitir oo ku yaal dhinaca koonfureed ee ceelka (dhammaadka tuubadu waa inuu kordho ugu yaraan 5-10 cm oo ka sarreeya heerka dhulka, waxaanu xoojinnaa tuubada cagaarka, oo ku rusheeyaa dhulka oo si fiican u xakameynaya.
Xagga woqooyiga tuubada hoose ee ceelka waxaan ku shubaa hillock yar oo dhul bacrin ah, oo ku yaala bartanka kaas oo aan dhigeyno seedling, wax yar ka jarid tuubada ilaa koonfurta. Duuf ku jiifso.
Waa muhiim! Marka laga beerto abuuris, laba burooyinkeeda waa in ay ku sii jiraan dhulka hoostiisa, intiisa kale - laga bilaabo kor. Labada indhood ee ugu sareeya isla markiiba ka dib markii la beeri karo waa la gooyn karaa, waxay dardar-gelinaysaa koritaanka baadiyaha.
Biyaha dhalidda. Waraabinta canabkana leh tiknoolajiyadaan si toos ah ayaa loo marin doonaa tuubada, sidaas darteed qoyaanka si fudud u gaari doonaa xididdada geedka canabka ah.
Xeerarka daryeelka xilliyeed ee sabiibta canabka ah
Beerta saxda ah ee sabiibta waa mid aad muhiim u ah, laakiin waxaa jira wado dheer oo lagu kori karo canab ka hor intaan helin goosashada ugu horeysay.
Waraabinta, dabacsan iyo mulching carrada
Wax kasta oo aad rabto inaad doorato, qoyaan wuxuu u baahan yahay wax badan, ugu yaraan 30 litir oo biyo ah oo baadiyaha ah toddobaadkii, iyo mudada u dhaxaysa waraabinta waa inaysan joogin wax ka badan afar maalmood.
Habka ugu fiican ee loo yareeyo isticmaalka biyaha waa faleebo, hase yeeshee, ikhtiyaarkeenna la soo jeediyay ee lagu beeri lahaa tuubooyin dhuumo-tuubo ayaa sidoo kale ka ilaaliya ciidda si fiican u qalajinta.
Ma taqaanaa? Canab koray ciidda waxay u baahan tahay celcelis ahaan hal iyo badh biyo ka badan kuwa kuwa lagu beeray carrada madow.
Inta lagu jiro beergooyska iyo laba ama saddex todobaad ka hor intaan canabku si aan caadi ahayn looma waraabin, waxaad u baahan tahay kaliya in yar oo lagu rusheeyo ciidda agagaarka duurka.
Waa muhiim! Adiga ma cabbi kartid caleemaha dusha sare ee caleemaha, biyaha ayaa daadi kara oo kaliya xididka!
Dhulka agagaarka baadiyaha waa inuu had iyo jeer dabacsan yahay. Si aan waqtiga loo dhigin looska, isla markaana waqti badbaadin waqtiga haraaga, mulch waa la isticmaalaa, si kastaba ha ahaatee waa mid aad u muhiim ah in la isticmaalo qalabka la xaqiijiyay oo si khaas ah loo daaweeyay ujeeddadan, maadaama tuulada cayayaanka laga heli karo cawska ama cawska.
Bacriminta ayaa sida ugu wanaagsan loo codsadaa ka hor ubax, qiyaastii marxaladda dhismaha saddexda caleemood ee hore. Ha ku dhaafin dharka, waxay si aad ah u yareyn kartaa koritaanka geedka canabka ah, gaar ahaan da'da yar.
Guga waxaa wanaagsan in lagu quudiyo grapevine leh bacriminta nitrogen, wax yar ka dib, isticmaal bacriminta macdanta adag, potash iyo ash alwaax.
Sida kor ku xusan, noocyada kala duwan ee sabiib ee sabiibta ayaa leh iska caabin kala duwan ee cudurada iyo cayayaanka.
Sidaa awgeed, dareenka waa in la siiyaa su'aashan si ka duwan, si kastaba ha ahaatee, iyadoon loo eegin waxa aad kala duwan tahay, xusuusnow: Cudurro badan (gaar ahaan fangaska) way adagtahay in la baaro iyo xitaa way adag tahay in la daweeyo, inta ay awoodaan iyo waa in laga hortago. Maanta, waxaad ka iibsan kartaa dukaanka si gaar ah loo doortay si loo ilaaliyo canabka badan ee cudurrada ugu khatarta badan iyo cayayaanka, oo ay ka mid yihiin wasmo iyo shilin.
Waa muhiim! Fungicides iyo sunta cayayaanka waa in la beddelo si wakhti ah si ay cayayaanka iyo cudurada cudurada ma helayaan iska caabin ah sunta.
Guga hore, ujeedooyinka ee prophylaxis, geedka canabka ah waxaa lagu daaweyn karaa sulfate birta (300 g baaldi biyo ah). Dheeraad ah, sida ugu muhimsan, waxaa suurtogal ah in la sameeyo laba ama seddex koob oo kale, hase yeeshee ka dib marka uu kelyaha u kaco, waa in la yareeyaa cayayaanka.
Cunnacan si wanaagsan u falceliya daawooyinka sida "Actellic" ama "Fufanon" (laga bilaabo), "Topaz" ama "Fundazol", "Confidor", "Quadris" ama kumbofil colloidal.
Xooga saar cudurradaas iyo cayayaanka halista ah ee ah beeraha canabka ah ee ku yaalla aaggaaga. Si kastaba ha ahaatee, hal bil ka hor goosashada, dhammaan daaweynta waa in la joojiyaa.
Canab ee dalag goosasho wanaagsan aad bay muhiim u tahay in si haboon loo go'aamiyo. Xididdada ugu horeysa ee dushooda waxaa la fuliyaa seddex bilood ka dib markii laga beerto seedling.
Marka xigta waa qaabka buuxa ee baadiyaha. Iyada oo ay ku jiraan manjooyin caadi ah 8-12 godad qumman. Celcelis ahaan 10-12 canabkiinna waa inay ku dhacaan mitir ah dhererka baadiyaha si ay kooxo farabadan u badani u badiyaan duurka.
Ma taqaanaa? Iyadoo manjooyin aan ku filneyn oo canab, waxaa laga yaabaa in la'aanta potassium, taasoo keentay in berry hoos u dhaco ee size, si liidasho u bislaaday ama dillaac.
Caleemaha qallafsan, sidoo kale, waa in laga saaraa, sababtoo ah waxay soo jiidayaan khayraadka muhiimka ah iyo qaadashada xoogagga loo baahan yahay geedka canabka ah, oo ay ku jiraan si ay u sii noolaadaan xilliga qaboobaha.
Dhibaatada barafka ee sabiibta canabku guud ahaan maaha mid xun, laakiin, sida lagu sheegay in ka badan hal mar, way kala duwan tahay iyadoo ku xiran hadba noocyada kala duwan.
Qaar ka mid ah sabiibta, oo leh daryeel habboon, waxay u adkeysan karaan heerkulka heerkulka Dhaxan 30 digrii, laakiin celcelis ahaan, iyada oo aan la qaadin tallaabooyin habboon, nooc noocan oo kale ah ayaan u badnayn inuu ka badbaado xilliga qaboobaha oo leh dhaxan ka daran -15 ° C. Sida for wax kasta oo dilka ah, canab si dhaxan naftiisa ma aha mid cabsi leh sida qolof barafka sameeyay on xididada iyo ciidda.
Gaaban, sabiibta jiilaalka aad u baahan tahay inaad daboosho. Dhulka, caws engegan, dhoobada cagaarka ah, peat, foorno, duufaan dareemid iyo walxo kale ayaa ku habboon tan.
Waa muhiim! Ma ku daadi kartid canab kula marsada ama balka, bacda guntada iyo, marka lagu daro, maaddadani si sahal ah ayay u qoyaan waxayna u daadiyaan si xun.
Аккуратно снимает лозу с опор, скручиваем в жгут, укладываем на землю, прикрепляем шпильками (можно использовать проволоку). Затем присыпаем лозу землей слоем 20-25 cm. Dusha sare, haddii loo baahdo, daboolo caws ama qalab kale.
Haddii garoomada ee gobolkaaga si gaar ah u adag tahay, waxaa fiican in la dhigo geedka canabka ah ee grooves si gaar ah loo diyaariyey oo kaliya ka dib markii ay ku rushaysaa, sidaas daraadeed damaanad ah in dhaxan ma dhaawici doonaa geedka.
Waa muhiim! Ka hor inta bilawga ah ee cimilada qabow, dhulka waa in si fiican u qoyan yahay, sababtoo ah dhaxan ayaa ku dhuftay qoto dheer galay ciidda qalalan iyo geedka canabka ah ayaa u dhiman kara!
Taasi waa dhan. Waxay kaa caawinaysaa inaad koraan dhadhan fiican iyo caafimaad leh canab Guga, ka dib marka heerkulka diirran ee ugu dambeyn la dhiso, waxaan u baahanahay in aan ka saarno hoyga, iyo canabkeennu wuxuu uga mahadcelin doonaa caleemaha yaryar ee qorraxda dheer ee la sugayay.